2 mafomu ekuti uzorore, fungisisa uye bvisa | IPhone nhau
2 mafomu ekuzorora, kufungisisa uye kusagadzikana
Wava musi weChina, uye pakati pehupenyu hwezuva nezuva uye kuswedera kwevhiki, vazhinji vedu tinozviwana takatsamwa kupfuura zvakajairwa. Kushungurudzika idambudziko rakakomba Parizvino, mavambo ezvimwe zvakawanda zvehutano, zvemagariro uye zvehupfumi matambudziko (zororo rekurwara, kuderera kwekuita, kurasikirwa kwekutarisirwa ...) uye nekudaro, nhasi ndinokuunzira mafomu maviri ayo, kunyangwe iwo asingazogadzirise hupenyu hwako, Hongu, ivo ive rubatsiro rukuru kwauri.
Nhasi ndinokuunzira maviri ekuzorora uye ekufungisisa maapplication, ine mitinhimira yakakosha uye mifananidzo iyo ichakubatsira kujekesa pfungwa dzako, tarisa kufema kwako, uye "kudzima" kubva pasirese nekushushikana kwakakukomberedza. Tora maminetsi mashoma zuva rega rega, kumba, muhofisi kana kune chero imwe nzvimbo yakanyarara, uye shandisa chero eaya maapplication kusimudzira hupenyu hwako. Zviya, izvozvi zvava kutengeswasaka kana iwe uchimhanyisa unogona kuzviwana nekuchengetedza ma euro mashoma.
"Sunny" iko kufungisisa uye kutandara kunyorera kwaunowana mitanhatu inozorodza yemhando yepamusoro 3D zviitiko zvine mutsindo nemifananidzo yezvakasikwa izvo zvinokubatsira iwe kudzikisa kushushikana kwako, kuzorora uye kurara zvakanyanya zvirinani. Mukuwedzera, iwe unogona kugadzirisa chimwe nechimwe chezviitiko, uye kusanganisa ruzha nenzira inonyanya kukunakira. Zvakare inosangana pamwe neiyo Health application ye iPhone yako kuti uratidze kuwanda kwemoyo wako kuitira kuti ugone kuona zvakajeka hukama pakati pezvikamu izvi zvekuzorora uye nemoyo wako.
"Sunny" ine mutengo wenguva dzose we € 3,49 asi ikozvino unogona kuiwana ye € 2,29 kwenguva yakati rebei
"Windy" chishandiso chakada kufanana neicho chakapfuura nekuti, zvazviri, chinobva kune mumwe chete anovandudza. Ichowo chirongwa chekuzorora icho sanganisa zviitiko zvakasiyana mhando yepamusoro ine parallax mhedzisiro uye ruzha rwezvakasikwa, kunyanya mhepo. Nenzira iyi iwe unozokwanisa kuwedzera kugona kwako kuisa pfungwa uye kurara zvakanyanya zvirinani manheru ega ega.
"Windy" ine mutengo wenguva dzose we € 2,29 asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 2 mafomu ekuzorora, kufungisisa uye kusagadzikana
Apple inobvisa zvikamu zvitatu kubva kuApp Store: Dhizi, Mitambo Yekudzidzisa uye Makatalog
Apple Inoburitsa WatchOS 4.0.1 yekugadzirisa Series 3 LTE Kubatanidza Matambudziko